သင် Domain မှတ်ပုံတင်သူ (သို့) Reseller တစ်ယောက်နှင့်အလုပ်လုပ်ပါသလား။ | Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, မေလ 13, 2015 ကြာသပတေးနေ့, မေလ 14, 2015 Douglas Karr
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အတော်လေးအလုပ်လုပ်သောကြောင့်သူတို့သည်အေဂျင်စီတစ်ခုအတွက်ပုံမှန်မဟုတ်သောအလုပ်များကိုလုပ်ရန်တစ်ခါတစ်ရံတောင်းဆိုကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူလုပ်ကိုင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး သည်သူတို့၏ဒိုမိန်းဝယ်ယူမှုကိုကိုင်တွယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားအခါအားလျော်စွာငှားရမ်းသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ညှိနှိုင်းမှုနည်းပါးခြင်းနှင့်ပါတီများအကြားငွေအမြောက်အမြားရရှိခြင်းတို့ကြောင့်ထိုဖြစ်စဉ်များကိုကိုင်တွယ်ရန်ကြားဖြတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရှိရန်ကောင်းမွန်သည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုမျှမျှတတဖြောင့်ရှေ့သို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားပါတီတစ်ခုအတွက်ရန်ပုံငွေများအပ်နှံပြီးပြီဆိုပါကကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောအခါတွင်ငွေများထုတ်ပေးခြင်းကိုခွင့်ပြုကြောင်းအတည်ပြုပေးသော third party escrow အကောင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသည်။ ဒိုမိန်းအမည်၏ပိုင်ဆိုင်မှု။ မည်သည့်သဘောထားကွဲလွဲမှုမျိုးကိုမဆိုဖြစ်ပွားပါက၊ ဤသည်မသမာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအရောင်းအဖြစ်ပျက်မှရပ်တန့်။
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာကျွန်ုပ်တို့သည်ပုဂ္ဂလိကပါတီတစ်ခုမှဒိုမိန်းတစ်ခုဝယ်ယူရန်ညှိနှိုင်းခဲ့သည်။ ဒိုမိန်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည် Yahoo! အသေးစားစီးပွားရေး... ဒါမှမဟုတ်ဒါကျနော်တို့ထင်ခဲ့တယ်။
ကျနော်တို့ငွေကို escrow ထဲမှာထည့်လိုက်တော့ပျော်စရာကစခဲ့တယ်။ အခြားပါတီအားဒိုမိန်းကိုသော့ဖွင့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီခဲ့သည်၊ ဒိုမိန်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်၏ဒိုမိန်းမှတ်ပုံတင်သူသို့လွှဲပြောင်းရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ သင်ဘာလုပ်နေသည်ကိုသင်သိလျှင်၎င်းသည်ဒိုမိန်းမှတ်ပုံတင်သူပေါ် မူတည်၍ အချိန်ယူရုံမျှသာဖြစ်သည်။
နောက်နေ့မနက်မှာဖောက်သည်ရောပုဂ္ဂလိကပါတီရဲ့ဒိုမိန်းအကောင့်တွေကိုငါစစ်ဆေးပြီးဘာမှမပြောင်းလဲဘူး။ နောက်တစ်နေ့တွင်ငါထပ်မံစစ်ဆေးခဲ့ပြီးလွှဲပြောင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့သည် ဖျက်သိမ်း။ ပုဂ္ဂလိကပါတီကိုဖုန်းခေါ်ပြီးသူဘာမှမလုပ်ဘူးလို့ပြောတယ်
ကွန်ဖရင့်ခေါ်လုပ်ပြီး Yahoo! ၏ပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့ကိုခေါ်ခဲ့သည်။ ခဏလောက်စောင့်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဟာဒိုမိန်းကိုပြင်ပမှာမလွှဲပြောင်းနိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့ support tech နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါမှာ Yahoo! အသေးစားစီးပွားရေးအကောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒိုမိန်းကိုအကောင့်မှအကောင့်သို့လွှဲပြောင်းနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ဒိုမိန်းများကိုဝယ်ယူပြီး၊ ရောင်းချပါကသင်၏နားများကဤအချက်ကိုသာအားဖြည့်ပေးလိမ့်မည်။ တစ်တန်ဒိုမိန်းလွှဲပြောင်းအငြင်းပွားမှုများပြီးနောက်, ICANN သင်မှတ်ပုံတင်သူတစ်ယောက်မှတစ်ခုသို့လွယ်ကူစွာလွှဲပြောင်းနိုင်မည်ကိုသေချာစေရန်ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။ ဒိုမိန်းမှတ်ပုံတင်သည့်ကုမ္ပဏီများသည်သူတို့၏ဖောက်သည်များကိုဓားစာခံအဖြစ်မခံနိုင်စေရန်ဤအရာသည်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဤသည်မှာကျွန်ုပ်၏ Yahoo အားမေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။ ထောက်ခံမှုကိုယ်စားလှယ်ပေမယ့်သူကမေးခွန်း၏ရဝုဏ်ကိုနားမလည်ပုံရသည်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ပဲဆက်ပြောသည်။ ဒီနေရာမှာကြောက်စရာကောင်းလာတဲ့အချိန်ပါ။
ငါ Yahoo ကမှတ်ပုံတင်! ကျွန်ုပ်တို့၏တတိယပါတီနှင့် Yahoo နှင့်အတူဖုန်းတွင်ရှိနေစဉ်ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်အတွက်အသေးစားစီးပွားရေးအကောင့်။ ကိုယ်စားလှယ်။ ထို့နောက်ကိုယ်စားလှယ်ကသူ၏အကောင့်ကိုဖျက်သိမ်းရန်တတိယပါတီအားပြောကြားခဲ့သည်။ သို့မှသာဒိုမိန်းကိုပြန်လွှတ်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒိုမိန်းကိုပြန်လည်ရယူရန်ချက်ချင်းမှတ်ပုံတင်ရမည်။
ဘာ?! ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒိုမိန်းကိုစျေးကွက်ထဲကိုမိနစ်အနည်းငယ်လောက်ထုတ်ပြီးထပ်မှတ်ပုံတင်တော့မှာလား။ ! အလိုအလျောက်ဝယ်ယူသည့်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူထွက်ရှိအချို့သောချွန်ထက်သောဒိုမိန်းအမည်တစ်ခုကိုထိုအချိန်တွင်ဒိုမိန်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဆုံးရှုံးခဲ့ပါကမည်သို့နည်း။ (ဒါတကယ်ရှိမရှိငါမသိပေမယ့်တောင်းဆိုမှုကိုမယုံဘူး) ငါကိုယ်စားလှယ်ကိုမေးခွန်းထုတ်သူသူဒိုမိန်းကိုထိန်းချုပ်လိမ့်မည်ဟုငါ့ကိုစိတ်ချပါ။
ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကအစပျိုးလိုက်ခြင်းအားဖြင့်ဒိုမိန်းကိုကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်အသစ်၏ Yahoo ၌မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။ အသေးစားစီးပွားရေးအကောင့်။
နောက်တစ်နေ့တွင်ဒိုမိန်းသည်တတိယပါတီ၏အကောင့်တွင်ရှိနေတုန်းဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည် ၀ င်ရောက်လာသည်။ ဒီနေရာမှာငါသုတေသနနှင့်အချို့လုပ်ခဲ့တယ် WHOIS ရှာဖွေမှု ဒိုမိန်းနှင့်ဆက်စပ်သောအများပြည်သူဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုရန်။ သေချာသည်မှာဒိုမိန်းသည်တတိယပါတီနှင့်မှတ်ပုံတင်ထားဆဲဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ထူးဆန်းတဲ့အပိုင်း…ဒိုမိန်းမှတ်ပုံတင်သူက Yahoo မဟုတ်ဘူး။ သေးငယ်တဲ့စီးပွားရေးကဖြစ်ခဲ့သည် သြစတြေးလျရှိမဲလ်ဘုန်းမြို့အိုင်တီ.
ငါမဲလ်ဘုန်းမြို့အိုင်တီသို့လက်မှတ်တစ်ခုထားပြီးလျှင်သူတို့ကတကယ့်မှတ်ပုံတင်သူ၊ Yahoo! အသေးစားစီးပွားရေးရုံရောင်းချသူများဖြစ်ကြသည်။ Arghhhhhh! အဲ့ဒီအချိန်တွေအားလုံးဟာအလဟ။ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။
ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ Melbourne အိုင်တီမှာဒိုမိန်းလွှဲပြောင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ခဲ့သည်။ တိုတိုပြောရရင်၊ သူတို့မှာအကောင့်တစ်ခုမှနောက်တစ်ခုသို့သင်အမှန်တကယ်ရွေ့လျားလို့မရနိုင်တဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့စနစ်ရှိတယ်။ အကောင့်ပိုင်ရှင်ကိုလူတစ် ဦး မှတစ် ဦး သို့ရွှေ့ပြောင်းရုံသာဖြစ်သည်။ ငါလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်အခကြေးငွေပေးခဲ့တယ် (Yahoo! Small Business မှာဘာပေးခဲ့သလဲဆိုတာငါမသိဘူး) ။
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒိုမိန်းကိုနောက်ဆုံးတွင်လွှဲပြောင်းထားပြီဟုယုံကြည်သည်။ ကျွန်တော့်ရဲ့နောက်ဆုံးအသိပေးချက်က ၇ ရက်လောက်ကြာလိမ့်မယ်။
ဤနေရာတွင်အဓိကအချက်မှာသင်၏ domain ကိုသင်မှတ်ပုံတင်သောနေရာကိုသတိထားရန်ဖြစ်သည်။ ICANN ၏စည်းမျဉ်းများကိုချိုးဖောက်သောလုပ်ငန်းစဉ်၊ စာရွက်စာတမ်းများမရှိခြင်း၊ မသိဘဲအထောက်အပံ့နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပင်စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာနှင့်ရယ်စရာကောင်းသည်။ ငါဒိုမိန်းပြန်လည်ရောင်းချသူများအစားမှတ်ပုံတင်မှာမှတ်ပုံတင်ထားလျှင်ဖြစ်စဉ်ကိုအများကြီးပိုမိုလွယ်ကူခဲ့ကြနိုင်ကြောင်းသံသယရှိသည်။
ပိုကောင်းသေးသည်မှာ GoDaddy နှင့်သာတွဲပါ။ သင်ဤပြissuesနာများကိုရှောင်ရှားရုံတင်မကဘဲ၊ သင်ငွေများစွာသက်သာပြီး ၀ န်ဆောင်မှုကောင်းများရရှိလိမ့်မည်။
Tags: ဒိုမိန်းအမည်များကိုဝယ်ခြင်းဒိုမိန်းအမည်များဝယ်ခြင်းကြားမှအာမခံပေးသောအပြင်လူမဲလ်ဘုန်းမဲလ်ဘုန်းမြို့ကဒိုမိန်း'to yahooyahoo ဒိုမိန်းမှတ်ပုံတင်yahoo domains များ
Jon Thompson က
မေလ 14, 2015 မှာ 7: 54 AM
ငါ Yahoo ကသေးငယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကနေ Godaddy ကိုဖောက်သည်တစ်ယောက်ကိုအပြိုင်အဆိုင်ပြောင်းရွှေ့ပေးတဲ့ပရောဂျက်တစ်ခုကိုစတင်လိုက်ပြီ။ ကျွန်တော့်မေးခွန်းက Yahoo အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဖြတ်ကျော်ပြီး Melbourne IT နှင့်စကားပြောရန်ကြိုးစားခြင်းကိုကျော်သွားရုံသာလော။ ဒါ့အပြင်အားလုံးကောင်းကောင်းစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် Melbourne IT နဲ့အတူဒိုမိန်းကိုအပြည့်အ ၀ ထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်လား။ အကယ်၍ စွန့်စားရမည့်အချိန်နှင့်အချိန်ကိုယူမည့်အစားကျွန်ုပ်တို့သည်မှတ်ပုံတင်ထားသောဒိုမိန်းကိုထိုနေရာတွင်ထားခဲ့သင့်မလို။
မေလ 15, 2015 မှာ 12: 53 AM
ဟိုင်းဂျွန်ရိုးသားစွာအတွေ့အကြုံအလွန်ဆိုးရွားတယ် (Melbourne ရဲ့ Domain interface ဟာ Chrome မှာတောင်မှအလုပ်မလုပ်ဘူး) ငါကအဲဒီမှာမရှိဘူး ဒိုမိန်းသည်ယခုအချိန်တွင်ကူးပြောင်းနေသည် (လက်ချောင်းများကိုဖြတ်ကျော်သည်) ။
မေလ 17, 2015 မှာ 4: 52 pm တွင်
ပြန်ကြားချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Doug! ငါဒီအပေါ် updates များကိုမျှော်လင့်နေပါတယ်။ ငါကသူတို့ကိုမှတဆင့်အခြား client ကိုနှင့်သာဆက်ဆံခဲ့ကြပြီးဒီအခက်အခဲကြောင့်သူတို့ကိုငါအဲဒီမှာထားရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ အနည်းဆုံးတော့လူတွေကဒီဘလော့ဂ်ပို့စ်ကိုတွေ့ပြီး Yahoo အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကနေစပြီးသူတို့ရဲ့အုတ်မြစ်ကိုမစဖို့ရွေးချယ်ကြတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တိုင်းကိုသူတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းကိုပေးသည်ကိုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ အခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုရွေးချယ်သောအခါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်သင့်သည့်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်ပါ ၀ င်ခြင်း၏နည်းပညာကိုလူအများကပင်အကြိမ်ကြိမ်သတိမထားမိကြပါ။
2:2016 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 3, 59
ငါမူကားငါကြိုက်တယ် Whois နောက်ထပ်